Go’aan cajiib ah oo aan hore loo maqal oo kasoo yeeray taliska AMISOM ee Soomaaliya (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Go’aan cajiib ah oo aan hore loo maqal oo kasoo yeeray taliska AMISOM ee Soomaaliya (AKHRISO)
Taliska AMISOM ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday hadal cajiib ah oo ay ku sheegeen inay bilaabeen qaab ay ugu talo-galeen inay magdhow ku siiyaan dadka rayidka ah ee qasaaraha kasoo gaaray weerarada tooska ah oo ay ciidankooda ka geysteen qeybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya.
War-saxaafadeed uu soo saaray madaxa AMISOM ee horumarinta siyaasadda ee waaxda taageeradda nabadda ee ururka Midowga Afrika Jide Okeke ayaa lagu sheegay inay talaabadaasi looga gol-leeyahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhexeeya AMISOM iyo dadka deegaanka.
Talaabadaan ayaa sidoo kale noqonaysa midii ugu horeeysay oo ka dhacda Afrika, taas oo ay magdhow ku bixinayan ciidamo ka tirsan Afrikaan ah oo ka socda Midowga Afrika.
Dhinaca kale, hadalkaas kasoo baxay taliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa yimid kadib markii la soo gaba-gabeeyey kulan shaqo oo bishan 6-dii ilaa 7-dii oo lagu soo bandhigay dukumentigii ugu dambeeyey ee ku saabsan arrintaas.
Qorshahaan ayaa maalmaha soo socda la hor-geyn doonaa xarunta weyn ee Midowga Afrika ee ku taala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, si madaxda Midowga Afrika ay arrinkaasi u meel mariyaan toddobaadyadda soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, talaabadda ay qaadeen taliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa ah midii ugu horeeysay ee laga taaba-geliyo qaaradda Afrika, waxaana dhibanayaasha ay AMISOM dhibaateeyaan lagu qiyaasaa kumanaan qof, mana kala cadda qaabka ay AMISOM u bixin doonaan kharashaadka magdhowga oo ay siinayaan dadkaasi shacabka ah.